Tsingerin-taona: 25 taona namoronan-kira Rakotoarijaona Julien | NewsMada
Tsingerin-taona: 25 taona namoronan-kira Rakotoarijaona Julien
Feno 25 taona amin’ity taona ity ny nilomanosan-dRakotoarijaona Julien teo amin’ny tontolon’ny famoronan-kira, ankoatra ny maha mpihira azy ihany koa. Angamba, tsy faheno firy izany anarana izany, kanefa tao ambadiky ny fahombiazan’ny mpanakanto maro, toa an’i Rija Ramanantoanina.
Tsy handalo fotsiny ity tsingerin-taona ity fa hosantarina amin’ny hetsika lehibe, mitondra ny lohahevitra hoe “Miara-mihira sy midera”. Izany hoe hotontosaina rahampitso tolakandro eny amin’ny FJKM Ambohidroa Antehiroka. Hizara roa ny fandaharam-potoana ka amin’ny ampahany voalohany, hisy ny fanompoam-pivavahana. Antsan-kira fiderana kosa no handravaka ny tapany faharoa.
Maromaro ireo antoko mpihira handray anjara amin’izany, toy ny Gadhona Artistika, ny SLK Mpihira, ny Tsantan’ny famonjena, ny AMFF ary ny Feon’ny famonjena. Nambaran-dRakotoarijaona Julien fa samy hikalo ireo hira ara-pilazantsara nosoratany avokoa ireo antoko mpihira ireo. Hiara-hiaka-tsehatra amin’izy ireo ihany koa ny tompom-pety.
Ankoatra izany, nasaina manokana amin’ity fanokafana ny fanamarihana tsingerin-taona ity i Rija Ramanantoanina. Amin’ny maha fankalazana tsingerin-taona azy, tsy hadino ny fanapahana mofomamy sy ny fizarana vatomamy ho mariky ny fifaliana.
Santatra ambavarano ihany ny rahampitso fa mbola hisy ny hetsika goavana, hatao etsy amin’ny CC Esca Antanimena ny 9 septambra izao, ho fanamarihana ny 25 taona namoronan-dRakotoarijaona Julien hira.